Isifo sikashukela - izimpawu zesifo nezimpawu zaso > Isifo sikashukela
Isifo sikashukela - izimpawu zesifo nezimpawu zaso
Namuhla, isifo sikashukela mhlawumbe siyisifo esivame kakhulu. Kepha, ukuze ube nokuqonda ushukela futhi uphendule ngezimpawu zesifo, okokuqala kufanele uqonde ukuthi sivela kanjani lesi sifo. Kuyaqapheleka ukuthi lesi sifo singazibonakalisa sinokuphazamiseka okuhlukahlukene emzimbeni, kepha sonke sinempahla ejwayelekile - ukuthuthukiswa kwe-hyperglycemia (ukwanda koshukela wegazi nomzimba), nangesifo esibi kakhulu - ukungabekezeleli ngokuphelele kweglucose.
Ngenxa yalokhu kugula, kukhona ukushoda kwe-insulin emzimbeni, noma i-insulin ekhiqizwa emzimbeni ingamane ingasebenzi. Kungenxa yalezi zizathu lapho izimpawu zesifo sikashukela zivame ukubonakaliswa. Ake sibheke izimpawu eziphambili zesifo sikashukela, izinkomba zokubonakaliswa kwalesi sifo, nokuthi yiziphi izibonakaliso zesifo okufanele zikuqwashise.
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela
Ngeshwa, esikhathini sethu, abantu bamatasa kuphela ngomsebenzi, imisebenzi nomsebenzi wasendlini, kuyilapho bambalwa abantu abanaka impilo yabo futhi bengaziphenduli izimpawu okufanele ziqwashiswe. Khumbula ukuthi noma yiziphi izimpawu zalesi sifo zikhonjwa ngokushesha ngokushesha futhi uthintane nodokotela ngokushesha, ngoba lesi sifo siyingozi impela futhi kungcono ukuqala ukwelashwa ngesikhathi. Ngakho-ke, ake sibheke ukuthi yiziphi izimpawu eziphambili zesifo sikashukela esivame ukwenzeka futhi kufanele zivise umuntu. Lokhu kufaka phakathi:
izinwele ziqala ukuphuma kakhulu. Lokhu kungaphawulwa njengophawu oluphambili lwesifo sikashukela. Umuntu ophile ngokuphelele, yebo, ulahlekelwa nezinwele, kepha hhayi ngaphezu kwezinwele eziyi-100 phakathi nosuku, kepha esigulini esinesifo sikashukela, inqubo ejwayelekile ye-metabolic iphuliwe, yingakho izinwele ziwe kakhulu, ziba mncane, zibe buthaka nokukhula kwazo kunciphe kakhulu,
kukhona ukozela kakhulu nokuqhekeka. Kufanele uqaphele ngokushesha uma uhlangabezana nobuthakathaka obukhulu nokukhathala izinsuku eziningana ngaphandle kwesizathu esithile. Lokhu kungenzeka ngenxa yokuthi umzimba unamandla amancane, awukhipha kumaseli owukhiqizayo ngosizo lweglucose. Uma kwenzeka ukuthi ezinsukwini ezimbalwa uthola ukuqwashisa nobuthakathaka obukhulu (ngenkathi ulala ngokugcwele ngokwanele), kungcono ukuxhumana ngokushesha nodokotela bese wenza izivivinyo ezidingekayo,
izinyawo noma izintende ziqala ukuluma. Kuyaqapheleka ukuthi ngaphezu kwe-85% yeziguli ezinesifo sikashukela zithi enye yezimpawu zokuqala ababenazo kwakuwukulunywa ezinyaweni noma ezandleni. Kuyaqapheleka ukuthi, kaningi, iziguli zinegazi elibi futhi amanxeba aphola kabi kakhulu. Ngisho nokusikwa okuncane kungapholisa isikhathi eside kakhulu futhi kungaholele ekunciphiseni.
Eqinisweni, kunezimpawu eziningi zalesi sifo futhi uma uzinakekela wena nempilo yakho, kunzima ngokwanele ukuba ungazinaki. Izimpawu zihlukile impela, kepha okuyizona ezidingakalayo kufanele ziphawulwe:
ukuchama njalo nokuqina, umuntu uvame ukuqala ukusebenzisa indlu yangasese, ikakhulukazi ebusuku,
kunokuwohloka okuqinile komzimba (ukunciphisa umzimba) noma, ngokuhlukile, umuntu uqala ukuthola isisindo ngokushesha ngokwanele,
ngokukhuphuka okubukhali futhi okunamandla kashukela, umuntu angalahlekelwa ingqondo futhi aze awele ku-coma yesifo sikashukela (lapho kunzima kwabanye ukushiya),
kungahle kube nezinkinga ngombono (umbono ungancipha ngokushesha okukhulu, ukubangwa kwamakhaza nezinye izifo),
kungahle kube nezinkinga ngohlelo lwezinhliziyo (inhliziyo), izifo zenhliziyo
izinkinga zokugaya ezinzima
isicanucanu nokuhlanza kungenzeka ekuseni,
umuntu ukhathele kakhulu futhi akanamandla,
kunezinkinga zokulala, ukuqwasha njalo,
kunokoma okuqinile, umuntu uhlala womile futhi cishe akunakwenzeka ukuthi aqede ukoma kwakhe,
ukwanda noma okuphambene nalokho kunciphisa isifiso sokudla,
abesifazane bavame ukuba nezinkinga nezifo “ohlangothini lwabesifazane” (isifo sokusha kanye nezinye izifo ezithathelwanayo),
kuvela izinyo esikhunjeni (ikakhulukazi ezingalweni nasemilenzeni),
igazi lihlangana kabi futhi noma yimaphi amanxeba apholisa kanzima.
Njengoba ukwazi ukubona, izimpawu ziyahlukahluka futhi kunzima kakhulu ukungazinaki. Uma uzwa izinguquko emzimbeni futhi nezimpawu ziqala ukukukhathaza kakhulu, kuzodingeka uthinte udokotela ngokushesha, okuzokwenza uhlolo, akuxilonge futhi uma kunesidingo, unikeze ukwelashwa okufika ngesikhathi futhi okudingekile. Khumbula ukuthi yizimpawu zesifo ezisiza ngesikhathi ukukhomba ukugula.
Umsebenzi oyinhloko udokotela ngesikhathi sokwelashwa kwesifo sikashukela ukuqedwa kwezimpawu nezimpawu ezikhona. Ngesikhathi sokwelashwa kwe-mellitus yesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukunamathela ekuzithibeni okucacile, ngoba kubaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela ukuba ziqaphele njalo izinkomba zeglue glucose. Kuyaqapheleka ukuthi yize isifo sikashukela i-mellitus (namuhla) singelapheki ngokuphelele, yi-insulin esiza futhi ifundise abantu ukugcina lesi sifo singaphansi kokuqina.
Ukubonakaliswa kwe-insulin, ngokusho kososayensi, kwatholakala emuva ngo-1923. Owokuqala owathola futhi wasungula i-insulin uthathwa njengososayensi odumile waseCanada - uFrederick Bunting. Kwakunguye lapho ngasekupheleni kukaJanuwari 1923 waba owokuqala ukusindisa isiguli sikashukela ngokumjova nge-insulin. Isiguli sasingumfana oneminyaka engu-14 ubudala futhi enesifo sikashukela esithuthuke kakhulu. Kungakuhle ukuthi wazi ukuthi kune-World Diabetes Day, egujwa ngoNovemba 14. Futhi, ngifuna ukuqaphela ukuthi lolu suku lukhethwe ngenxa yokuthi uBunting wazalwa ngoNovemba 14th. Ngakho-ke yingakho lokhu okutholakele kungafi ngalolu suku.
Izimpawu zesifo sikashukela
Ngokwayo, lesi sifo sihlukaniswe izinhlobo eziningi. Ake sibheke zonke izinhlobo ngemininingwane eminingi nokuthi zihluka kanjani:
isifo sikashukela sokukhulelwa.
Esikhathini sikashukela sohlobo lokuqala, imijovo ye-insulin ibekelwa isiguli, esimweni sohlobo lwesibili, amaphilisi anqunyelwe isiguli ukugcina izinga likashukela elidingekayo. Kepha uhlobo lomthambo luvame ukutholakala kwabesifazane abakhulelwe. Kuyaqapheleka ukuthi ngemuva kokubeletha, isifo sikashukela singahamba sodwa, kepha owesifazane usazodinga ukuthi ahlolwe kanye ngonyaka futhi ahlole ushukela wegazi. Njengoba isifo sikashukela sokukhulelwa singakhula sibe yinto evamile ngemuva kwesikhashana.
Kuyaqapheleka ukuthi ukwelashwa kunqunywe kuphela ngudokotela oya kuye. Kufanele futhi kukhunjulwe ukuthi uma lesi sifo sisesigabeni esithuthuke kahle, ukuluthwa esibhedlela kungenzeka kudingekile. Njengoba isiguli kufanele sibe ngaphansi kokuqashwa njalo kodokotela. Njengomthetho, amaphilisi ekuqaleni anqunywa, kepha uma ifomu lesifo seliqalwa ngokuqinile, khona-ke imijovo ye-insulin ingabekwa okokuqala, kepha ngemuva kokujwayelekile ushukela isiguli singadluliselwa kumathebulethi.
Into yokuqala ukuthi bonke odokotela batusa ukuthi banake isifo sikashukela wukudla okunempilo. Njengoba kungukudla okufanele okuzosiza ukulawula ushukela wegazi futhi uqiniseke ukuthi ushukela awukhuphuki. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukudla kugcwele imifino, okungukuthi, udinga ukudla okungenani izikhathi ezi-4 - 5 ngosuku. Kungcono ukudla ngezingxenye ezincane, kepha kaningi. Ngaso leso sikhathi, ungakhohlwa ukuthi kungcono ukulahla ngokuphelele imikhiqizo ethile. Imiphi imikhiqizo efakwa ku-contraindication? Umbuzo okhathaza zonke iziguli ezitholakale zinesifo sikashukela. Phakathi kwale mikhiqizo, kufanelekile ukuphawula:
imikhiqizo yobisi enamafutha aphezulu,
inyama ebhemayo (umvimba, amasoseji),
khipha ngokuphelele ama-confectionery namaswidi ahlukahlukene ekudleni,
ushukela omnandi neziphuzo zamandla,
Le yimikhiqizo ephambili okufanele isiguli sikashukela siyiyeke. Kungaba ngcono ukube bekukhona izithelo, imifino, inyama enamafutha nenhlanzi ekudleni. Umsoco udlala indima enkulu ekwelapheni isifo esifana nesifo sikashukela. Kepha, ngasizathu simbe, abantu abaningi bayakuvumela ukuthi kudlule lokho, bakhala ngokuthi kunzima noma kungenzeka ukuthi benqabe imikhiqizo ethile. Ezimweni ezinjalo, kufanele ucabange ukuthi yini ebaluleke kakhulu kuwe, impilo noma imikhiqizo ethile. Ngemuva kwakho konke, lesi sifo singabulala futhi ungakhohlwa ngaso.
Njengesiphetho, kufanelekile ukuphawula
Uma uqala ukubona ushintsho emzimbeni wakho, thintana nodokotela ngokushesha. Njengoba lesi sifo siyingozi kakhulu futhi uma singatholakali ngesikhathi, imiphumela ingaba mibi kakhulu futhi ibulale. Kungcono ukuphumelela ngokushesha izivivinyo ezidingekayo ezizosiza ekuboneni nasekukhonzeni ukugula. Ngemuva kwalokho, udokotela olapha uzokunikeza ukwelashwa okudingayo futhi akutshele ngezimpawu zalesi sifo. Kuyaqapheleka ukuthi esikhathini sethu kunezikole ezahlukahlukene zikashukela, lapho iziguli zitshelwa ukuthi zingadliwa futhi ziphile kanjani nesifo sikashukela.
Vele, iqhaza elikhulu ekwelashweni nasekuvinjelweni kwesifo sikashukela lidlalwa yiyona ndlela yokuphila efanelekile nokudla okufanele, kubalulekile kakhulu ukuhola indlela yokuphila esebenzayo, ukuchitha isikhathi esithe xaxa emoyeni omusha, futhi futhi uhlukane nemikhuba emibi (uma umuntu enayo). Kubaluleke kakhulu ukuzama ukungadli ngokweqile, kungcono ukudla kaningi, kepha izingxenye kufanele zibe zincane ngokwanele. Kungenxa yokulandela izeluleko ezilula ezinjalo ukuthi ungahola impilo egcwele konke engeke ihluke kakhulu kumuntu ophilile. Khumbula, thina uqobo lwethu kufanele sisolwe ngokuqubuka kanye nokwanda kwezifo eziningi.